भाेलि फेरि बैठकमा जानु छ (व्यङ्ग) - Top Nepal News
भाेलि फेरि बैठकमा जानु छ (व्यङ्ग)
जेष्ठ १७, २०७९ मा प्रकाशित
Published at 2022-05-31
नगरकार्यपालिका बैठक लाइभ । सुन्दैमा अचम्म। तर, भयाे । सबै सुकिलामुकिला थिए । बैठक लाइभ भइरहँदा "अटेन्टिभ" देखियाे । तर, "अटेन्सन टु डिटेल्स" चै देखिएन । एक मनाेसंवाद -
हत्तेरिका, क्या बाजी मारे केटाकेटीले । मेयर साप भन्नुपर्ने । पुरै हाइटेक कुरा गर्छ । बैठक लाइभ गरिदियाे । यसाे बेलाबेलामा नाक काेट्याउन पनि नपाइने, अरु बाेल्दा कितित्त हाँस्न पनि नपाईने, यस्साे तलतल लाग्दा केहि फाँकाे मार्न पनि नपाइने । कस्ताे फसाद पर्ने भयाे ए बरै । हामी जिन्दावाद मुर्दावाद भनेर हिड्दा, महेन्द्र पुलिस क्लबमा चिसाे सिँढीमा ठिगुंरिदा कता थिए कुन्नी ? पार्टीका लागि मरिमेटेर हिँड्दा कता थिए ? यत्रा वर्ष भयाे राजनीति भनेर लागेकाे, वडा सदस्य हुँदै वडाअध्यक्ष हुन कति पापड पाेल्नुपर्याे । बालकाेट, महाराजगञ्ज, बुढानिलकण्ठ र काेटेश्वर धाएकाे त कुरै नगराैँ । जेनतेन टिकट ल्यायाे । हारिन्छ कि भन्ने पिरैपिर । पैसाेकाे खाेलाे बगाउनु पर्ने ।
के जादु गर्याे याे मेयर केटाले, 'य ब्राे' , 'कम अन एभ्रीबडी', 'हल्ला चाहियाे हल्ला' भन्दै गित गाउँथ्याे रे । आफू त त्यस्ता गित सुन्दैनथे । नाच पनि त्यस्तै हुँदाे रैछ । कता के कता पारेर नाच्ने रैछ ।
पछि नातीकेटाले बार्दली बसेर अँऽऽऽअँऽऽऽऽ एऽऽऽऽएऽऽऽऽ भन्दै कराएकाे सुने । के गरेकाे ए केटा भनेर साेधेकाे, बालेन दाईकाे र्याप सुनेकाे हब्बा भन्छ । लाै सुना त के भन्दाे रैछ गितमा भनेर सुनेकाे हामी जस्तै राजनीति गर्ने भनाैदाले गरेकाे गल्ती, वेथिती, विसंगती भाका हालेर परररररर भन्दाे रैछ । नाती पनि र्याप मै संवाद गर्न थाल्याे फेरि, ''पालाे गयाे अब बुढाखाडा, युवाहरुले ढाक्छन् अब डाँडाकाँडा" एऽऽएऽऽ भन्दै बाटाे लाग्याे । म रुल्लटुल्ल । त्यसै जितेकाे हाेइन रैछ ।
हामीले राजनीति गरेर दारी पकायाैँ । जेलनेल खायाैँ । एक अर्काे पार्टीलाई गालीगलाैज गर्न तल्लिन रह्याैँ । कतिसँग रिसायाैँ । व्यक्तिगत घटना दर्ताकाे सिफारिश गर्याैँ बस्याैँ । उपभाेक्ता समिति बनाउन सहजीकरण गर्याै । दलका नेता फकायाैँ । अहिले पनि विचार गर, हामी अनुभवी छाैँ । हामीले जस्ताे कसैले जानेकाे छैन भन्ने घमण्ड पालेका छाैँ । यस्ताे गर्ने, उस्ताे गर्ने तपाईँ काे ? भन्दै नारी निमाेठ्दै सिंगाेरी खेल्न पछि पर्दैनाै । आफ्ना एजेण्डा के हाे , के गर्ने हाे भन्नै नै स्पष्टता छैन ।
सिसडाेलमा फाेहाेर फाल्न पाएनाैँ भनेर कराईरह्याैँ । तर, त्यहाँकाे वास्तविकता के हाे कहिल्यै गएनाैँ । फाहाेरकाे फाेहाेरी राजनीतीमा गनाईरह्याैँ । एकअर्कालाई दाेषीरह्याै ।
अब भाइरल भेलु बाजेले भनेजस्ताे- ए पख्नाेस टाे............ पख्नाेस टाे.............पख्नाेस टाे....... हत्तेरिका भन्दै दाैडिएँ, थिएँ । झल्यास्स बिउँझिएँ । असिनपसिन भइसकेकाे छु । भाेलि फेरि बैठकमा जानु छ ।।
लेखक : जीवन शैली ।
बेलकोटगढी–८ नुवाकोट ।।
मध्ये रातमा आएको पहिरोले उर्लेनीमा घरमा क्षति पुरायो
विदुर नगरकार्यपालिकाको माइन्युट कार्यपालिका सदस्यले च्याते